यौन जिज्ञासा – Nepal24News
स्वप्नदोष ( नाइट फल ) संबन्धी महत्वपूर्ण जानकारी: थाहा पाइराखौ
राती निदाएको समयमा वीर्यपात हुनुलाई स्वप्नदोष भनिन्छ । स्वप्नदोषलाई नाइटफल, नाइट डिस्चार्ज पनि भनिन्छ । जब पुरुषको यौनांगले पुर्ण रुपमा कार्य गर्न थाल्छ, सेक्स ग्रन्थीले स्राब छोड्न थाल्छ । जब अण्डकोष चाहिनेभन्दा बढी स्राब जम्मा हुन्छ, त्यसपछि स्वप्नदोषद्वारा लिंगको माध्यमद्वारा बाहिर निस्कन्छ । पहिलोपटक स्वप्नदोष भएको व्यक्ति डराउन सक्छ । आफूलाई कुनै रोग लागेको सम्झन सक्छ । सधैं एकलै रहन मन पराउन थाल्छ । कतिपय अवस्थामा आफूलाई नामर्द पनि ठान्न सक्छ । तर, स्वप्नदोष एकप्रकारको यौनसंबन्धी क्रिया हो । युवाअवस्थाको सुरुवातीअवस्था र किशोर अवस्थाको अन्तिम अवस्थामा यस्तो स्वप्नदोष देखिन सक्छ । कयौं पुरुषलाई पनि स्वप्नदोष निरन्तर हुन सक्छ । युवाअवस्था तथा किशोरावस्थामा मानिसको दिमागमा सेक्ससंबन्धी कामबासना जागृत हुन थाल्छ । जब उ सुत्छ, राती दिनभरको स्मरण हुन थाल्छ या कुनै कल्पनामा डुब्न थाल्छ ।
यौनसम्पर्कबाट गर्भ रहिहाले त्यसको समाधान कसरी गर्ने? यस्तो छ उपाय
म २२ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ। केही दिनअघि एक जना केटासाथीसँग मेरो यौनसम्पर्क भयो। जब ऊसँग सम्पर्क भयो त्यो दिनदेखि मेरो तल्लो पेट एकदम दुखिरहेको छ। यस्तो किन भएको होला ? हामीले कुनै साधन पनि प्रयोग गरेका थिएनौं। उक्त दिन मेरो महिनावारी भएको ११ दिन भएको थियो। यसबाट कतै गर्भ रहने त होइन ? कस्तो बेलाको सम्पर्कले गर्भ रहन्छ ? गर्भ रहिहाले कसरी त्यसको समाधान गर्ने ? यौनसम्पर्कपछिको पीडा हामीलाई थाहै छ, यौनसम्पर्क एउटा आनन्ददायक क्रियाकलाप हो। यौन सम्पर्कबाट नै सायद मानिसले प्राप्त गर्न सक्नेमध्येको चरम आनन्द प्राप्त गर्छ। असीम आनन्द, चरमसुख, स्वर्गीय आनन्दजस्ता कतिपय नाम पनि यो सम्पर्कको आनन्दसँग जोडिएका छन्। यद्यपि सबै यौनसम्पर्क सुखमय नहुन सक्छन्। यौनसम्पर्क पीडायुक्त हुनुमा योनिको संक्रमण वा योनि सुख्खा हुनु प्रमुख कारण हुन्छन्। त्यसैगरी यौनसम्पर्कसम्बन्धी नकारात्मक धारणाले ग्रसित भ
१० मिनेट भन्दा बढी यौन सम्पर्क राख्नु राम्रो होईन राख्दा के हुन्छ जानी राखौ !!!
यो कुराले सवैलाई आश्चार्यचकित पार्न सक्ला तर यौन सम्पर्कको सवैभन्दा आदर्श लम्बाई भनेको १० मिनेटको हो । हरेक पुरुष तथा महिलाहरुमा दश मिनेटको यौन सम्पर्क नै सवैभन्दा उत्तम हुने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ ।मानिसहरुलाई यौन सम्पर्कका बेलामा लामो समय भएन भन्ने चिन्ताले सताइरहेको बेलामा यो अध्ययनले धेरैलाई खुसी पार्ने भएको छ । अधिकांस मानिसमा यौन सम्पर्कको लम्बाई लामो हुनु पर्छ भन्ने भ्रम छ । तर वास्तवमा त्यस्तो होइन ।सोसाइटि फर सेक्स थेरापि एन्ड रिसर्चका ५० अनुसन्धानकर्ताले हालैमात्र गरेको एक अध्ययनले एक देखि दुई मिनेटको यौनसम्पर्कको समयलाई साह्रै छोटो र त्यस्तो यौनसम्पर्कले खुसी नदिने तथा आनन्द पनि नदिने देखाएको छ भने तीन देखि सात मिनेटसम्मको सम्पर्कलाई मध्ययमस्तरको अर्थात केही हदसम्म सन्तुष्टी लिने समुहमा राखेको छ । काठमाडौं डेलीयसैगरी, अध्ययनले १३ मिनेटभन्दा माथिको सम्पर्कलाई अत्याधिक लामो
सामान्यतः उत्तेजित अवस्थामा लिंगको सालाखाला लम्बाइ यस्तै १५ सेन्टिमिटर हुन्छ। धेरैजसो व्यक्तिको लिङ्गको लम्बाइ १३ देखि १६ दशमलव ५ सेन्टिमिटरभित्र परे पनि यस्तै ७ प्रतिशतजति व्यक्तिको लिङ्ग ११ सेमीको हाराहारीमा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। यदी साँच्ची नै तपाईं लिङगको आकार सानो हो र बढाउन चाहनु हुन्छ भने तलका स्टेप अपनाउन सक्नु हुन्छ। तर यी कुरा हरु अपनाउदा राम्रो संग ख्याल गरि र ध्यानपुर्बक गर्नु होला | किनकि यसले स्वास्थ्यमा असर पुराउन पनि सक्छन | जान्नुहोस के के हुन् ति तरिका हरु – १. कसरत तथा हातैले तन्काउने विधिः दैनिक रूपमा पर्याप्त समय लिङ्ग-दोहन (दुहुने) जस्तो गरी तन्काउने गरिएमा लिङ्गको नाप बढ्ने कुराको दाबी गरिएको छ। अरु ३ तरिका केके छन् त जान्नको लागि यो भिडियो पुरा हेनु होला –
यस्ता छन् अत्याधिक हस्तमैथुन गर्दा हुने हानी…थाहा पाइराखौ
एजेन्सी । हस्तमैथुन एउटा सामान्य यौन व्यवहार हो । तर यो अन्य यौन व्यवहार भन्दा यसकारण फरक छ कि अत्याधिक हस्तमैथुन गर्नाले शरीरमा मानसिक तथा शारिरीक असन्तुलन तथा अन्य साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ । तर यसको असर हरेक मानिसमा फरक फरक हुन्छ । त्यसभए कति पटक हस्तमैथुन गर्दा अत्याधिक हुन्छ त ? एक दिनमा २ अथवा २ भन्दा धेरै पटक हस्तमैथुन गर्नुलाई अत्याधिक मान्न सकिन्छ । अधिकांश चिकित्सकहरु हस्तमैथुन गर्ने अवधीलाई सकेसम्म कम गर्न सल्लाह दिन्छन् । चिकिस्तकहरुका अनुसार हप्ता २ देखि ३ पटकमात्रै हस्तमैथुन गर्नु उचित हुन्छ । किन ? त्यसमा थुप्रै कारणहरु छन् । सर्वप्रथम तपाईले यो जान्न जरुरी छ कि हस्तमैथुन गर्दा शरीरको भित्री तापक्रम बढ्छ । यसैकारणले नै हस्तमैथुनको बेला कहिलेकाही निकै गर्मी महशुस हुनेगर्छ । अझ कहिलेकाही त पसिना नै आउने गर्छ । एनेल डट ओर्ग (anael.org) नामक एक वेबसाइटका अनुसार जब चरम उत
सम्भोग गर्दा १ मिनेट पनि टिक्न सक्नुहुन्न भने यसरि प्याजको प्रयोग गनुहोस ! बिधि सहित
कतिपय मानिसहरु आफ्नो बैवाहिक जीवन खुसियाली बनाउनको लागि बजारमा पाइने अनेक किसिमका सेक्स सम्बन्धि औषधिहरु प्रयोग गर्ने गर्छन। यस्ता औषधिहरुले शरीरलाई नोक्सान पुर्यारहेका हुन्छन। यदि तपाईं योन क्रियाकलापमा आफुलाई कमजोर महशुस गर्नुभएको छ भने यो घरेलु उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंको समस्या हटेर जानेछ। आयुर्वेदमा प्याजका कयौं फाइदाहरु बताइएको छ । प्याजले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्रै हैन की पुरुषका अनेकन स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। प्याजमा पाइने सल्फर कम्पाउंड, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवनॉयड्स र पॉलीफिनॉल पुरुषहरुको शारीरिक कमजोरीलाई हटाउन एकदमै मद्दत पुय्राउछ। १. सेतो खालको प्याजबाट २ चम्मच रस निकालेर त्यसमा १ चम्मच मह मिसाएर हरेक दिन बिहान पिउनाले पुरुषहरुको कमजोरी हट्छ। २. प्याजलाइ गोलाकार आकारमा काटेर रेसा रेसा अलग गरी घिउमा केहि समय हल्का भुटेर हरेक दिन बिहान खालि पेट
सानो लिङ्गले महिलालाई कसरी यौन सन्तुष्टि दिने जानिराखौ !
अन्र्तगत आज हामीले युवा तथा किशोर किशोरीका मनमा उब्जने केही प्रश्नहरु डक्टर खेम कार्कीलाई गरेका छौँ । तपाईँमा पनि यस्ता प्रश्नहरु हुन सक्छन् । त्यस कारण हाम्रा प्रश्नमा र डाक्टर खेम कार्कीको जवाफ अवश्य पढ्नुहोस् । सानो लिङ्गले यौन सन्तुष्टि हुन्छ कि हुन्न ? ठूलो लिङ्ग भयो भने यौन सन्तुष्टि हुने सानो हुदा नहुने भन्ने कुरा गलत हो । धेरैले यर्थाथ कुरा थाहा पाउनु भन्दा पनि भ्रमको भरमा आफूलाई चिन्तामा राख्ने गरेको पनि पाईन्छ । यौन सम्पर्क गर्दा आनन्द आउनको लागि ४ सेन्टीमिटरको लिङ्ग नै प्रर्याप्त हुन्छ । यौन सम्पर्कको क्रममा आनन्द आउने महिलाको स्नायू प्रणाली ४ अथवा ५ सेन्टीमिटर अगाडिको भागमा रहेको हुन्छ । त्यहि स्नायू प्रणालीले हो यौन सम्पर्क गर्दा आनन्द आउने । त्यसैले सानो लिङ्ग हुँदा आनन्द नआउने भन्ने कुरा गलत हो । यौन सम्पर्क गर्ने जोडीबीच हुने माया, खुशी र सहमतीले हो यौन सन्तुष्टि प्राप्
बिर्यलाई जम्मा गरे हुन्छ यस्तो फाईदा (भिडियो)
बिर्यलाई जम्मा गरे हुन्छ यस्तो फाईदा (भिडियो)बिर्यलाई जम्मा गरे हुन्छ यस्तो फाईदा (भिडियो)बिर्यलाई जम्मा गरे हुन्छ यस्तो फाईदा (भिडियो)बिर्यलाई जम्मा गरे हुन्छ यस्तो फाईदा (भिडियो)
यौन जिज्ञासा : श्रीमानको सधै निलो’ फिल्मको पोजले दिक्क भैसकेँ, अब पूर्ण सन्तुस्ती पाउन कसो गर्नु पर्ला?
यौन जिज्ञासा : श्रीमानको सधै निलो' फिल्मको पोजले दिक्क भैसकेँ, अब पूर्ण सन्तुस्ती पाउन कसो गर्नु पर्ला (भिडियो सहित)यौन जिज्ञासा : श्रीमानको सधै निलो' फिल्मको पोजले दिक्क भैसकेँ, अब पूर्ण सन्तुस्ती पाउन कसो गर्नु पर्ला (भिडियो सहित)यौन जिज्ञासा : श्रीमानको सधै निलो' फिल्मको पोजले दिक्क भैसकेँ, अब पूर्ण सन्तुस्ती पाउन कसो गर्नु पर्ला (भिडियो सहित)
पेटमा बच्चा भएको बेलामा यौन सम्पर्क गरे के हुन्छ ? थाहा पाइराखौ
पेटमा बच्चा भएको बेलामा यौन सम्पर्क गरे के हुन्छ ? थाहा पाइराखौ पेटमा बच्चा भएको बेलामा यौन सम्पर्क गरे के हुन्छ ? थाहा पाइराखौ पेटमा बच्चा भएको बेलामा यौन सम्पर्क गरे के हुन्छ ? थाहा पाइराखौ पेटमा बच्चा भएको बेलामा यौन सम्पर्क गरे के हुन्छ ? थाहा पाइराखौ